Mogadishu Journal » 2018 » July » 6
Xulka Belguim ayaa koobka adduunka ka reebay xulka Brazil guulna ka gaartay saaxiibada Neymar kadib kulan xiiso leh oo ay labada xul soo bandhigeen kulankii ka dhacay Kazan Arena. Belguim ayaa wakhti horeba si dar-dar leh ku soo galay kulanka iyaga oo doonayay in ay goolal wakhti...
Mjournal :-Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa fadhi ay yeesheen waxa ay uga doodeen arimo ay ku jirto xaalada Siyaasadeed ee Soomaaliya, waxa ayna uga digeen dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga faro-galinta ay ku hayaan dowlada Soomaaliya. Kulanka ay yeesheen Baarlamaanka...
Xulka Faransiiska ayaa 2-0 kaga badiyay kooxda Uruguay. Waxaana labada gool Faransiiska u kala dhaliyay cayaaryahanada kala ah Raphael Varane iyo Antoine Griezmann. Xulka Faransiiska waxay u gudbeen cayaaraha rubac-dhammaadak Koobka Adduunka, waxay la cayaari doonan kooxda soo...
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif oo toban sano oo xarig ah lagu xukumay
Mjournal :-Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa toban sano oo xabsi ah ku xukuntay ra’iisal wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaz Sharif, kaddib markii ay ku heshay dambi ah eedeymo musuqmaasuq. Sidoo kale Maxkamadan ayaa waxaa ay ku xukuntay min toban san oo xarig ah gabar uu...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga dalka Jabuuti ayaa maanta gaaray Carta oo ah magaaladii marti galisay shirkii dib-u-heshiinta Soomaaliya ee lagu yagleelay Dowladdii kumeel gaarka ahayd sanadkii...
RW Kheyre ” Waxaa jira Afku dhiiglayaal”
Mjournal :-Ra’isul wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa mar kale ku Celiyay in ay laali doonaan dhammaan dhaqamada xun oo uu kamid yahay Musuq-maasuqa. Ra’isul wasaare Kheyre waxa uu sheegay inay la dagaalamayaan shaqsiyaadka ku sifoobay Musuqa iyo Khilaafka waxa...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa khamiistii shalay kormeer ku tagey Dugsiga tababarka Ciidamada Gen. Gordon ee Magaaladan Muqdisho, halkaasoo ay horay u maamulayeen Imaaraadka Carabta. Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa xerada kula hadlay Ciidan ka tirsan...
Mjournal :-Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya waxaa uu ku eedeeyay in ay ku xadgudubtay xuquuqda Aadanaha,islamarkaana dowladda Soomaaliya intii ay jirtay ay geysatay Xadgudubyo badan oo ka dhan ah Xuuquuqda Aadanaha. Kulan yeesheen Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa lagu...
Hub iyo Saanad loo dhiibay Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka oo Shabaab u gacan galay
Mjournal :-Maamulka Jubbaland ayaa dowladda Soomaaliya u qoray Warqad Cabasho ah oo ku aadan dhibaatooyin Amniga iyo Siyaasadda halis ku ah oo ka socda degaanada maamulka Jubbaland,islamarkaana ay waddaan xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka. Qodobada kasoo baxay Jubbaland ayaa...